September 2018 – Nepalinomy
नेपालको चालू खाता घाटा उच्चः एडीबी
काठमाडौं, १० असोज । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको चालू खाता घाटा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.७ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । आयात निरन्तर बढ्दै गएको र आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर रहेका कारण यो वर्ष चालू खाता घाटा यसअघि प्रक्षेपित ५.२ प्रतिशतको ऋणात्मक अवस्थाबाट बढेर८.७ प्रतिशत पुग्ने बैंकद्वारा जारी एसियन डेभलमेन्ट आउटलूक २०१८ अपडेटमा जनाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा चालू खाता बचत ३.५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा ८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । बैंकका अनुसार गत आव (सन् २०१८)मा नेपालको चालू खाता घाटा बढेर २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर नाघ्यो, यो एडीबीले गरेको प्रक्षेपणभन्दा दोब्बर हो ।
उच्च आयातका कारण गत वर्ष नेपालको व्यापार घाटा बढेर १० अर्ब ९० करोड डलर पुगेको उल्लेख गर्दै बैंकले चालू वर्ष पनि यही कारणले चालू खाता घाटा अझ विस्तारित हुने जनाएको हो ।
यो वर्षलाइ बैंकले नेपालका आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण भने ५.५ प्रतिशतमै स्थिर राखेको छ, जुन सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको वृद्धिभन्दा कम हो । गत आवमा बैंकले नेपालको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेकोमा ५.९ प्रतिशत रहन पुगेको एडीओमा उल्लेख गरिएको छ ।
विकासलाई प्रकृतिलाई सन्तुलित गरेर लैजाने हो कि लादिएको विकासे मुद्दाबाट प्रभावित भइ गरिबी र पछौटेपनमै रमाउने हो, छनोट हामीमै निर्भर छ ।
यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरूसहित आमसञ्चारका माध्यमहरूमा दुई खालका बहस देखिन्छन्– निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँनु हुँदैन भन्ने अर्को विमानस्थल बनाइनै पर्छ भन्नेहरू । खासगरी, विमानस्थल बनाउँदा २४ लाख रुख–विरुवाहरू काटिने, त्यसले जैविक विविधतामा असर पार्ने तर्क वातावरणवादीहरूले अगाडि सारेका छन् भने सरकारले २ सुरुमा २ लाखमात्र रुख–विरुवा काटिने, प्रत्येक एक रुखका सट्टामा २५ विरुवा रोपिने बताइरहेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा पछिल्लो सरकारी निर्णयपछि सुरुमा हात्ती हिड्ने बाटो भएकाले त्यहाँ विमानस्थल अनुपयुक्त भएको तर्क अघि सारियो । त्यसपछि २४ लाख रुख काटिने भएकाले वन नाश हुने तर्क राखिँदैछ । सरकारको प्रष्टीकरणपछि अझ त्यसभन्दा अगाडि गएर १ करोड विरुवा कहाँ रोप्ने भन्ने प्रश्न उठाइँदैछ । वास्तवमा यो नयाँ प्रश्न वा सन्दर्भहरू भने होइन ।
बाराको डुमरवानामा दोस्रो विमानस्थल बनाउने प्रसंग उठेदेखि (कोरियन कम्पनीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै) कहिले सिंगै बस्ती उठाउनु पर्ने भएकाले तिनलाई कहाँ पुनर्बास गराउने? त कहिले भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बन्ने भएकाले तेस्रो विमानस्थल किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्न उब्जाइँदै आइएको छ । पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि समेत समानका किसिमका मुद्दा उठाइएको छ । त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र कमजोर चट्टानी संरचनाका कारणले पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन नमिल्ने तर्कसमेत उचालिरहिएको छ । निजगढका सन्दर्भ वातावरणीय प्रसंग अहिले चर्को स्वरमा उराल्न थालिएको हो ।
सामान्य चश्माले हेर्दा यी कुनै पनि प्रश्नहरूलाई नाजायज भने भन्न मिल्दैन । पहिलो प्रश्नमा जाऔं, २०३० सालदेखि बसोबास रहँदै आएको टाँगिया बस्तीका १५ सय घरधुरीको आफ्नो जमिनको स्वामित्व पूर्जा (लालपुर्जा) छैन, सोही आयोजनाभित्र पर्ने मटियानी गाउँको पनि समान समस्या छ । अर्को काठगाउँमा भने लालपुर्जाधारीहरूलाई मुआब्जा दिन थालिसकिएको छ । विकासका नाममा आमनागरिकलाई थात न बासको बनाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको चरित्रभित्र पर्दैन । त्यसैले टाँगिया बस्तीको स्थानान्तर÷पुनर्बास टुंगो नलगाई आठ–दस हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर सरकारले झारा टार्न पाउँदैन, त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज गलत होइन ।
अहिले उठेको मुख्य सबाल बाँकी बसेको चारकोशे झाडीको मुख्य अंश मासेर विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भन्ने सरोकारका सन्दर्भमा भने सरकारले झारा टार्ने खालको जवाफ होइन, दिर्घकालीन हरियाली पुनस्र्थापनको कार्ययोजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ । नेपालका लागि विस्तारित ‘एयरपोर्ट सिटी’ आवश्यकताको विषय नै होइन । डुमरवानामा विमानस्थल विकसित भइसकेपछि वीरगन्ज र आसपासका सहरहरू स्वतः एयरपोर्ट सिटीमा परिणत हुनेछन् नै ।
हरियाली पुनस्र्थापनाका लागि दुई वटा मोडलहरू छन् । पहिलो वनविहीन बन्दै गएको नेपालको मध्य तराई क्षेत्र (चुरे दक्षिणका जिल्लाहरू)मा नयाँ वृक्षारोपणसहित पुनः वनविकास (रिफरेस्ट्रेसन) र अर्को हो, सिंगै रुखै स्थानान्तरण गरि नयाँ स्थानमा रोप्न मिल्ने प्रविधिको प्रयोगबाट वन विकास । पछिल्लो विधि केही महँगो भए पनि यस्तो विधि विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइसकेका देखिन्छ । बारा, पर्सा, धनुषासहित नजिकका जिल्लाहरूमा सम्भाव्य वन करिडोर पहिचान गरि हुर्किँदै गरेका रुख–विरुवाहरू जरैसहित यसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा अहिले उठेका मुद्दाहरू वनको सरोकारभन्दा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै नबनोस् भन्ने चाहनाबाट बढी प्रेरित भएको देखिन्छ । यो नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि उब्जने औसत समस्या बन्दै गएको छ । चाहे त्यो बाँधजन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूका हकमा होस् वा अन्य ठूला पूर्वाधार विकासमै किन नहोस् ।
नेपालको निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा विचारणीय पक्षचाहिँ के हो भने हालसम्म नेपालमा हवाई जहाजहरूको प्रमुख प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेको सिमरा विन्दुबाट सबैभन्दा नजिकको भारतीय विमानस्थल लखनउलाई अहिले भारत सरकारले स्तरोन्नती गर्दै क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रूपमा परिणत गर्दैछ भने दिल्ली विमानस्थलको बढ्दो चापलाई ख्याल गरेर उत्तर प्रदेशको झेवरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नजिकैको उडान क्षेत्रभित्र बन्ने ठूलो क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभाव पक्कै पनि भारतका यी महत्वाकांक्षी विमानस्थल विस्तार परियोजनामा पर्नेछ नै । त्यसैले निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने भारतीय मनसुवा हुनसक्छ । नेपाल–भारत सीमाबाट जम्मा २३ किलोमिटर दूरीभित्र रहेको निजगढ विमानस्थलमा उडान र अवतरणका लागि भारतीय हवाई आकासकै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यससँग जोडिएका मुद्दाहरू अहिले सतहमा देखिएका वा देखाइएका विषयभन्दा पनि गहिरा छन् ।
कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइसकेपछि एउटा भारतीय कम्पनीले समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणमा आफू सहभागी हुने इच्छा देखाएको थियो । भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले २०७२ असारमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बनाउनेतर्फ भारतको सहभागिता सहितको सम्भावना खोजिनुपर्ने बताएका थिइन । भारत सरकारको एयरपोर्टस अथोरिटी अफ इन्डियाले निजगढ विमानस्थलमा गम्भीर चासो देखाएको खबर यसअघि नै प्रकासमा आइसकेको होे । यस्ता चासोहरूलाई अहिले उठेका विषयभन्दा अलग राखेर हेर्न मिल्दैन ।
हेरिटेज फाउन्डेसनको शोधपत्रमा युरोपेली संघ (इयू) र अमेरिकाको विकास सहयोग नियोग (यूएसएड)द्वारा लगानी गरिएका कथित ‘हरित एनजीओ’हरूले वातावरण नीतिका नाममा विभिन्न किसिमका गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू लगाइ विकासशील देशहरूको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उदाहरणसहित उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा अफ्रिकादेखि एसियाका गरिबतम मुलुकहरूको हकमा बढी लागू हुने गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थललाई प्रदेश नं २ मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रकै कायापलट गर्नसक्ने आयोजनाका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक–सामाजिक अवसरहरूलाई अब पन्छाउँदै रुखविरुवा काटेमा अक्सिजन सकिने, जलवायु परिवर्तनको भयावह परिणाम भोग्नु पर्ने, वन्यजन्तु र चराचुंरिगीहरू मासिने, किराफट्यांग्राहरूको अस्तित्व लोप हुने बहस गर्न थालिएको छ ।
यही बहसलाई टकेर अघि बढ्ने हो भने, वन मासेर सडक, रेल्वे लाइन, विमानस्थल बनाउनु हुँदैन । नदीनाला नै छकेर कुनै बाँध र त्यसबाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्नु हुँदैन, पुल बनाउनका लागि नदीको मूल बहाव फर्काउनु पनि हुँदैन, किनभने त्यसबाट माछासहित जलचरहरूको क्रिडास्थल मासिन्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाइहाले पनि प्रशारण लाइन बनाउनै हुँदैन, किनकी त्यसभन्दा मुनि पर्ने वनजंगलमा विद्युतीय करेन्ट र विकीरणको प्रवाहले गर्दा गर्भिणी जनावरहरूको प्रजननमा असर पार्दछ ।
यसैगरि, जीएसएम प्रविधिका मोबाइलका टावरहरू यत्रतत्र बनाउनै हुँदैन । मोबाइलका संकेतहरू ग्रहण र प्रशारणका लागि बनाइने बीटीएस टावरहरूले फ्याँक्ने विकरण (रेडिएसन)का प्रभावले चराचुंरुगीहरूको जीवनमा मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्दै गएको छ । एउटा अध्ययनले सहरी क्षेत्रहरूमा बन्ने ठूल्ठूला अर्पाटमेन्ट र सौन्दर्यका लागि बाहिर सिसैसिसा हालेर बनाइने आकासे भवन (स्काइक्रेपर)हरूका कारणले गर्दा भंगेरा, रुप्पी÷डाङ्ग्रे÷सारौं तथा परेवाजस्ता मानव बस्तीमा रमाउने चराचुरुंगी मासिएर गएको देखाएको छ । त्यसैले अग्ला भवनहरू बनाइनमा रोक लगाइनु पर्छ । अहिले इन्टरनेट मानिसहरूको सामाजिक जीवनका लागि सबैभन्दा ठूलो ‘बाधक’ भएको छ । व्यक्ति-व्यक्ति इन्टरनेटमा झुन्डिइरहँदा पारिवारिक एवं सामाजिक संवाद हुने क्रम घटेको छ । मानिसहरू एकान्तप्रेमी र एकलकाटे बन्दै गएका छन् । विकासका यी ‘साइड–इफेक्टहरू’बाट वाक्कदिक्क भएका केही पश्चिमाहरू अब फेरि प्रकृतितिरै फर्कौैं (ब्याक टु नेचर) भन्ने अभियानमा लागिसकेका छन् ।
विकासलाई प्रकृतिलाई सन्तुलित गरेर लैजाने हो कि विकास नै अवरुद्ध तुल्याएर प्रकृतिमा रमाउने हो, छनोट हामीमै निर्भर रहनु पर्छ । लादिएको विकासे मुद्दाबाट विकासशील देशहरू प्रभावित बन्दै गएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
दिगो विकासका मिथकः
द हेरिटेज फाउन्डेसद्वारा प्रकासित एक शोधपत्रमा अर्थशास्त्री जेम्स एफ रोबर्टसले कसरी पश्चिमा वातावरण नीतिहरूले विकासशील देशका आर्थिक विकासमाथि रोक लगाइरहेका छन् भन्ने प्रष्ट पारेका छन् । शोधपत्रअनुसार अमेरिकी लबिङबाट सन् ७० को दशकमा डीडीटी छर्किनबाट रोक लगाइपछि एक पटक उन्मुलन भइसकेको औलो (मलेरिया) फेरि फर्केर आएको छ । जबकी, ४० देखि ६० को दशकसम्म अमेरिकी सहयोगबाटै विश्वभरि नै डीडीटी छर्कने काम भएको थियो । डीडीटीका कारण वातावरणीय प्रभाव परेको र मानवस्वास्थ्यमा समेत असर परेको भन्दै एक किताबमा आधारहीन ढंगले उल्लेख भए पनि त्यसैलाई गुरुमन्त्र मानेर विकासशील देशहरूमा सहयोग रोक्ने, तिनीहरूबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तु नकिन्ने भन्ने धम्की दिँदै डीडीटीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको शोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि ६० को दशकमै औलो उन्मुलन गरिएको भनिए पनि अझै पनि करिब ५५ जिल्लामा औलोको जोखिम छ । यहाँ वार्षिक २ हजारभन्दा बढी औलोका बिमारी देखिने गरेका छन् ।
हेरिटेज फाउन्डेसनको शोधपत्रमा युरोपेली संघ (इयू) र अमेरिकाको विकास सहयोग नियोग (यूएसएड)द्वारा लगानी गरिएका कथित ‘हरित एनजीओ’हरूले वातावरण नीतिका नाममा विभिन्न किसिमका गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू लगाइ विकासशील देशहरूको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उदाहरणसहित उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा अफ्रिकादेखि एसियाका गरिबतम मुलुकहरूको हकमा बढी लागू हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा यसको सिकार इन्डोनेसियाको वनजन्य उत्पादन भएको छ । विकासशील देशका आर्थिक विकास प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याउन विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), फ्रेन्ड्स अफ अर्थ, रेन फरेस्ट नेटवर्कजस्ता इयू र अमेरिकाका करदाताद्वारा भुक्तानी गरिएको राजस्वबाट अर्बौं डलरको अनुदान लिएर सञ्चालित हरित एनजीओहरूद्वारा सिर्जित वातावरणको हतियार प्रयोग हुने गरेको यो शोधपत्रले खुलासा गरेको छ ।
यस्तो लबिङको प्रभावले विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास संस्थाहरूसमेत आफ्ना लगानीका मूल नीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुँदै गएका छन् भने विकासशील देशका सरकारहरू प्रभावित बन्नु त स्वभाविक नै हो । नेपालमा रहेका झन्डै ४० हजार एनजीओहरूमध्ये अधिकांसले यी अन्तर्राष्ट्रिय आईएनजीओहरूबाट वातावरण संरक्षणका नाममा रकम लिइ थरिथरिका कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् । केही स्वघोषित अन्तर्राष्ट्रिय हरित एनजीओहरूले त सोझै सरकारसँग आफैले प्रत्यक्ष लबिङको कामसमेत गर्ने गरेका छन् । सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई यस्ता एनजीओहरूले बेलाबेलामा विदेश शैर गराउन लैजाने र त्यही बेलामा मौका छोपी विकासलाई प्रभावित पार्ने सन्धी, अभिसन्धी, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गराएर फर्काउने गरेका छन् । एक पटक हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो नेपालमाथि दायित्व बनेर बस्छ । अनि, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने नाममा अर्को मिडिया लबिङ सुरु हुन्छ । यस्ता आईएनजीओहरू आफैले मिडिया चलाउनेदेखि स्थानीय मिडियासम्बन्धी एनजीओ सिर्जना गरेर त्यसमा लगानी गर्ने, मिडिया क्याम्पेन चलाउने गरेका छन् । यसको प्रभाव विकास बहसमा देखिनु स्वभाविक नै हो ।
कारोबार दैनिक, ९ असोज २०७५
नागरिकको जीवनस्तरमा गरिएको लगानी टालटुले र देखावटीमात्र होइन, त्यो आउँदो पुस्ताका लागि समेत हुनसक्ने गरि परिवर्तनकारी हुनसक्यो भने मात्र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर भएको वास्तविक अनुभूति हुनेछ ।
देशमा न पर्याप्त सरकारी लगानी छ, न त उद्योग–व्यवसायको नै विस्तार भएको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना त परै जाओस्, अलिअलि काम गरिरहेका युवा वर्ग पनि हरेक दिन लर्को लागेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादनको अवस्था हेर्‍यो भने विरक्त लागेर आउँछ । त्यही खेत–बारीमा हजुरबुवा, बुवाका पालामा तीन बाली धान लाग्थ्यो । मकैका कुन्यु नै यति अग्लो र लामो हुन्थ्यो कि खरिदेले किनेर पनि सकिँदैन थियो । आफ्नै खेतमा उब्जेको तोरीले नै वर्ष दिनभरि तेल खान पुग्थ्यो । छोराका पालामा आइपुग्दा त्यही समान जमिनका एक बाली पनि धान उब्जनी नहुने अवस्था छ । मकै र धानले वर्षको आधा पनि थेग्दैन । तोरी त ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनै छाडे भने पनि हुन्छ । बेसाह भटमास र सूर्यमुखीको तेलका पोका पो भान्छाघरमा लडिरहेको देखिन्छ । कान्लामुनि लसुन, प्याज, छ्यापी उब्जनै पो छाडे । मोटर चढेर भारत र चीनबाट आउने लसुन, प्याजका विकासे दानाको राग परैबाट चिनिन थालेको छ ।
बन्द कोठामा बसेर अर्थतन्त्रको हिसाब–किताब निकाल्ने ‘विज्ञ’हरू टेलिभिजनका पर्दातिर भन्दिछन्– भूखण्डीकरणले उब्जनी कम भएको हो । बाबु–बाजेको पालाभन्दा बढी जमिन जुटाएर, आधुनिक ट्याक्टर, हार्भेस्टर लगाएरै खेती गर्नेहरूले तिनका कुरा पत्याउन छाडिसके । सरकारले कृषिको वृद्धिदर ५ प्रतिशत रह्यो भनिरहेका बेला किसान आफ्नो उब्जनीले नपुगेर बेसाह चामल किनेर खाइरहेको हुन्छ । तथ्यांकको हेराफेरि गरेर आममानिसको जीवनयापनमा केही सुधार हुँदैन, न त्यसले सही अर्थमा गरिबी निवारण गर्छ, न त मुलुकले समृद्धिको कुनै चमत्कार नै देखाउन सक्छ ।
सुधार नै नभएको भन्ने खालको निराशाजनक अवस्था पनि छैन । हालसम्म चालिएका प्रयासहरूमा अलिकता बढी जोडबल गर्ने हो, लगानी बढाउने हो; नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने भने विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकिने ट्रयाक भने तयार भइसकेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकांकको अद्यावधिक तथ्यांकले मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बढेर ०.५७४ पुगेको देखाएको छ, गत वर्ष यो ०.५६९ थियो । मानव विकास सूचकांकको गणना हुन थालेको सन् १९९० को तुलनामा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो सूचकमा ५१.९ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार नेपाल अहिले मध्यम मानव विकास भएका मुलुकहरूको पंक्तिमा छ ।
प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् १९९० मा औसत आयु ५४.३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ७०.६ वर्ष पुगेको छ । यसमध्ये महिलाको औसत आयु ७२.२ वर्ष र पुरुषको ६९ वर्ष छ । यसले आमनेपालीहरूको जीवनस्तरमा विगत ३० वर्षमा केही सुधार आएको देखिए पनि यो तुलनात्मक रूपमा सन्तोषप्रद आँकडा भने होइन ।
खरिद क्षमता वा क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा नेपालीहरूको औसत आय पनि सन् १९९० को तुलनामा दोब्बरले बढेको देखिन्छ । १९९० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनपी परक्यापिटा) १ हजार १६८ अमेरिकी डलरमात्र रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा २ हजार ४७१ डलर पुगेको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का आधारमा पनि ९० को दशकमा २ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले १ हजार डलर पुगेको छ । यद्यपि, यो मुलुकले यस तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेको औसत ४.५ प्रतिशतको प्राकृतिक वृद्धिदरको प्रतिफल मात्र हो । वास्तविकता के हो भने देशमा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर र त्यसले सिर्जना गरेका अवसरहरूबीच सामन्जस्यता छैन । र, हाम्रो धरातलीय यथार्थले देखाउने तस्बिर भने यस्तो छ– अर्थतन्त्रको सही विस्तार हुने गरि न सरकारले न त निजी क्षेत्रले नै लगानी प्रवाह गर्न सकेका छन् । यो पूर्वाधारको हकमा मात्र होइन, आधारभूत सामाजिक सेवामा उत्तिकै दुरुह अवस्था कायम छ ।
अहिले साक्षरता दर मुश्किलले ५९.६ प्रतिशत पुगेको छ, जसमध्ये १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा महिलाको साक्षरता दर ८०.२ प्रतिशत हुँदा पुरुषको ८९.९ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालयमा भर्ना हुनेदर ९५ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि विद्यालयबाट बाहिरिने दर २६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा जतिजति माथिल्लो तह हुँदै गयो, उति कम विद्यार्थी अनुपात देखिन्छ । यो सकारात्मक संकेत होइन । अझ त्यसमाथि पनि छात्राहरूको संख्या माथिल्लो तहमा घट्दै जाने क्रम बढ्दो छ ।
शिक्षा÷साक्षरताले आममानिसहरूको जीवनस्तर सुधारमा विशेष महत्व राख्छ, किनकी शिक्षित व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका लागि बढी सरोकार राख्ने गर्र्छन् भने श्रमबजारमा तिनको सहभागिताको दर पनि बढी हुन्छ । यद्यपि, यसका लागि सरकारले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशतमात्र लगानी गर्दै आएको छ ।
राम्रो जीवनस्तरसम्बन्धी अवधारणाका पाँच सूचक शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, स्तरीय जीवनयापन, सुरक्षित अनुुभूति र छनोटको सूचकांकमा औसतमा ७० प्रतिशत उत्तरदात्ताले सन्तोषजनक रहेको जवाफ दिएका छन् । यसमध्ये शिक्षाको गुणस्तरमा ७८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ६३ प्रतिशत उत्तरदात्ताले सन्तोषजनक भएको बताएका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने विगतका तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा केही सुधार भए पनि अझै ठूलो सुधारको खाँचो छ ।
प्रति १० हजार जनसंख्यामा केबल ६ जना डाक्टर र ५० अस्पताल बेड उपलब्ध रहेको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ ठूलो लगानीको चाहिने देखिन्छ । भन्नका लागि सरकारसँग रेडिमेड उत्तर तयार छ– मातृ मृत्युदर सन् १९९०मा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ९०१ बाट २४८ मा झरेको छ भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १९९०को १०७ बाट हाल ३३ मा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयु बढ्नु, मातृ र शिशु मृत्युदर घट्नुजस्ता सूचकले केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि अझै हामीले लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ ।
तथ्यांकीय समायोजनहरूपछि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढेको, प्रतिव्यक्ति आय बढेकोसमेत देखिए पनि आमनागरिकहरूको तहसम्म त्यसले अनुभूत हुने गरि सुधार भएकै छैन । अर्थतन्त्रमा सिर्जित मूल लाभ सीमित वर्ग र समुदायको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । विगतमा एक प्रतिशतभन्दा कम समूहले अर्थतन्त्रको मूल सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएका थिए भने अहिले करिब २ प्रतिशत अति धनाढ्यहरूले यसमा कब्जा जमाएका देखिन्छ ।
विश्व परिवेश र हाम्रो धरातलमा अलिकता फरक छ । विश्वमा सेवा क्षेत्र, त्यसमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट प्रविष्ट गरेका बहु–अर्बपतिहरूको हातमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भइरहेको देखिन्छ, तर नेपालमा रातारात उदाएका अर्बपतिहरूको सम्पत्तिको मूल स्रोत नै खुल्दैन, तर उनीहरूको सत्ता सञ्चालनदेखि राज्यका बहु–तहको स्रोत दोहनमा पहुँच भने अभूतपूर्व देखिन्छ । राज्यले लिने नीतिहरू बहुजन हितायःको सिद्धान्तबाट होइन, नीतिगत हस्तक्षेप गर्नसक्ने पहुँचवाला सीमित वर्गको स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको छ । त्यसैले माथिल्लो पंक्तिका (उपल्लो वर्ग) झन्झन् धनी हुँदै जाने अनि तल्लो तहका नागरिकहरू झनै कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य हुने अवस्था बढ्दो गतिमा छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय गरिबीको मानक परम्परागत परिभाषाबाट प्रेरित छ । त्यसैले विश्व बैंकले तोकेको प्रतिदिन १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको संख्या १५ प्रतिशतमात्रै छ भनेर सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूलाई तालु ठोक्न आधार पुगेको छ । बढ्दो महँगी, विस्तारित हुँदै गएको सहरीकरण, आममानिसको खानपिनको बानी–व्यवहारमा आएको परिवर्तन, शिक्षा–स्वास्थका लागि चाहिने आवश्यकता र स्तरीय आवासका लागि हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूसमेतको गणना गरि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि गरिबीको मानक ३ डलर आसपासमा रहनु पर्ने बहस एकथरि अर्थशास्त्रीहरूले चलाइरहेका छन् ।
स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीआइ)ले यसै वर्षदेखि बहुआयामिक गरिबी मापनका मापदण्ड र सूचकहरूमा केही सुधार÷संशोधन गर्दैैछन् । त्यसैले परम्परागत आधारमा हामीले भन्ने गरेको विगत दुई दशकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको तथ्यमाथि एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो छ । जीवन निर्वाहका लागि चाहिने लागत (कोली) विधिका प्रयोग गर्दा अहिले भन्दै आइएको २१ प्रतिशतभन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात बढी पनि हुनसक्छ ।
जनजीविकाको समृद्धि वा आमनागरिकहरूको जीवनस्तरमा स्तरोन्नतिको बहस अब परम्परागत ढर्राबाट होइन, विश्व परिवेशमा भइरहेका नयाँ विकासक्रमका आधारमा हुनुपर्छ र सरकारका कार्यक्रमहरू पनि त्यही दिशामा लक्षित हुनुपर्छ । परम्परागत ढंगले एक इन्चको कालो पाइप बाँसको टेकोमा उभ्याएर अलिपर जगबाट पानी खन्याइ मन्त्रीहरूले रिबन काटेर “अब ९५ प्रतिशतमा पाइपबाट स्वच्छ खानेपानी पुग्यो”, भन्ने भाषण गरेर हुँदैन । साँचो अर्थमा त्यसमा पानी बग्यो–बगेन? प्रत्येक घरपरिवारलाई खानेपानी पु¥याउन के पहल भयो? त्यो पानीमा गरिएको लगानीअनुसार तल्लो तहका नागरिकसम्म प्रतिफल पुग्यो भने भनेमात्र विकास समन्यायिक भएको ठहर्छ । अहिलेको जस्तो देखावटी विकासले त– चार दिनको चन्द्रमा, पाँचौ दिन औंशी भन्नेृमात्र प्रमाणित गर्दै गएको छ ।
कारोबार दैनिक २ असोज २०७५
अब साहसिक सुधार अगाडि बढाउनका लागि अब केही कुरामा पनि अलमल गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन, न त यसका लागि बाह्य समुदायका मुख नै ताक्नु पर्ने बाध्यता छ । गजेन्द्र बुढाथोकी हालैका दिनमा विकास बहसमा आमनागरिकलाई झुक्याउने काम गरिँदै आइएको छ । बलियो बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकातिर समृद्धिका कुरा गर्छन् भने अर्कातिर पूर्वनियोजित प्रश्नोत्तरसहितका टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा समृद्धि भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा मात्र मापन हुने विषय होइन पनि भन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक रथ हाँक्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालो भने अर्थतन्त्रको विस्तार नभईकन समृद्धि नआउने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका किचन क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री ओलीबाहेक आर्थिक मामिला बुझेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू विष्णु पौडेल र विष्णु रिमाल पनि छन् । त्यसैले आर्थिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने भाषण र ताली पाउन ओलीबन्धु समाजको कार्यक्रममा गर्ने भाषणमा तात्विक अन्तर भने हुने गरेको छ । आर्थिक मञ्चमा गरेको भाषणमा बढी आलोचना हुने भएकाले तथ्यगत कुरा बोल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता होला, तर यही गाम्भीर्यता मुलुकको विकास र समृद्धिका मामिलामा किन देखाउन नसकिएको होला, बुझिनसक्नु भएको छ । Continue reading “सानै कुराबाट साहसिक आर्थिक सुधार”
बा हिसाब मिलेन, मिल्दै मिलेन
तपाईँको एटीएममा कति थियो
मायाँ, स्नेह, सुरक्षा, नैतिक धरातलको?
तपाईँले के खानु भयो?
कसरी खानु भयो?
कति खानु भयो?
भोक लाग्याे भन्याै
जुटाउनु भयो खाना
हाम्रै स्वादका ।
के लाउनु भयो?
ख्याल गरेनाैं कहिले
राम्रो नाना हामीले
छाना जुटाउनु भयो कसरी?
चुहिँदा, तपाईँले थापेका हत्केलाबाट
तप्पतप्प सुरक्षा पो चुहिन्थ्यो ।
कहिले हलोका बिँडमा
कहिले अर्का जुठा भाँडामा
केबल हाम्रो सपना देख्नु भयो
अक्षर चिनाउने सपना
जब साक्षर भयाैं
अनि, तपाईँ नै पो झुत्रे देखिनु भयो
फाटेको टोपीका घेरामा
मलाई नै पो लाज लाग्ने भयो
तपाईँले ढाँट्नु भयो सँधैभरि
भोक लुकाउनु भयो
थकाइ लुकाउनु भयो
पीडा लुकाउनु भयो
संघर्ष लुकाउनु भयो
हाँसेर हामीलाई सँधै खुसी देखाउनु भयो
बा, हिसाब मिल्दै मिलेन ।
अहँ! तपाईको एटीएममा अझै
बाँकी थियो बचत
मायाँ घटेन कहिले,
स्नेह घटेन कहिले
पोहरकै कुरा त हो
खै कसले हो
बा! खानु हुन्छ कि भनेर
२ कोशा केरा दिएका दान
दाैराका फेरमा बाँधेर
नातिले खान्छ भनेर
ल्याइदिनु भएको ।
बा, हिसाब मिल्दै मिलेन
अहँ! पुग्दैन तिर्न कसैगरि
कति पो छ
तपाईको एटीएममा बचत?
-कुटी, बालुवाखानी, कपन
शिक्षा तथा साक्षरता दिवस गेट कालेज नेपालगन्जमा मनाइयो
शिक्षा तथा साक्षरता दिवस
नेपालगन्ज, आज सेप्टेम्बर ८, अर्थात विश्व साक्षरता दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवस। सन १९६५ मा युनेस्कोले हरेक बर्ष सेप्टेम्बर ८ लाई बिश्व साक्षरता दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेसङै बिश्व साक्षरता दिवस मनाउन थालिएको हो।
५१ औ साक्षरता दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा शिक्षा क्षेत्र र व्यवहारिक शैक्षिक बिकाशको लागि महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको पश्चिम् नेपालकै शान गेट भोकेशनल कलेजले आफ्नो विद्यार्थीहरुलाई अनुभवी र ब्यबहारिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत पाककला शास्त्रको बिशेषता र त्यस्को अर्थपूर्ण पाटोलाई थप उर्जा दिन स्वयं विद्यार्थीबाटै पाक पकवानको कार्यक्रम गरेर साक्षरता दिवस मनाएको छ।
आफैले सिकेको कुरा अनुभवी रुपमा पाककलाको प्रदर्शन गर्न पाउनु आफ्नो शैक्षिक यात्राको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको गेट भोकेशनलमा अध्यनरत छात्र तेजु भण्डारी बताउनुहुन्छ। ब्यबहारिक रुपमा जति तालिम गरियो त्यो भन्दा धेरै कुरा काम गराइ र आफ्नो अग्रज र गुरुहरुले सीप सिकाउने क्रममा अझै बढी र प्रभावकारी हुने उनी बताउछन् । तेजु हाल गेट कलेजमै रहेको कमर्सियल किचेनमा कार्यरत छन् , आफैले सिकेको शिक्षालाई व्यबहारमा उतार्न निकै मेहेनत गर्नुपर्ने तथा अन्य थप जानकारीलागि आफैले अनुसन्धान गर्नु पनि पर्ने भण्डारी बताउछन् । छिट्टै उनी अब वास्तविक आतिथ्य संसारमा होमिनेछन् र आफ्नो शैक्षिक यात्रालाई आगडि बढाउदै छन् । साक्षरताका लागि हरेक समाजको हरेक कोणलाइ अर्थपुर्ण हिसाबले नियाल्नु पर्ने र यो कार्यमा हामी समाजमा बस्ने हरेक ब्यक्तिको जिम्मेवारी पनि रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न।
पुर्ण साक्षरतामा अगाडी बढ्न तथा सबैलाई साथ लिएर जान हामी सबैको एकेबधदता र एकता अपरिहार्य रहेको छ। शिक्षित समाज अग्रगामी समाज र सुदृढ समाजको परिकल्पनालाई यथार्थमा उतार्न सबैको सहयोग अत्यावश्यक छ। शिक्षा तथा साक्षरता दिवसको सबैलाई शुभकामना !!
छरिएका स्रोत परिचालनबाटै समृद्धि
अहिले विकासे आयोजनाहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरा स्वयं सरकारलाई नै थाह छैन, तिनका लागि लाख, करोडका हिसाबले हरेक वर्ष ठूलो बजेट छर्ने काम भइरहेको छ, जसबाट ठोस प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन ।
पछिल्ला केही समययता ‘मुलुकमा केही छैन’, ‘गरेर केही हुँदैन’ भन्ने एकखालको धारणा एउटा वर्गमा विकसित हुँदै गइरहेको भेटिन्छ, खासगरि युवा पुस्ता हाम्रो विकास र पछ्यौटेपनको अवस्थाबाट बढी नै चिन्तित पनि देखिन्छ । यो चिन्ता अस्वाभिक पनि होइन । कतिपय बाह्य कारणहरूले र धेरैजसो आफ्नै कारणहरूले गर्दा हामी यो अवस्थामा रहेका हौं भन्ने कुरा बुझ्न अहिलेका पुस्तालाई कुनै ऐतिहासिक नजिरहरू देखाइरहनु पर्दैन । आर्थिक विकास र समृद्धिका मामिलामा हामी चुकेकै हौं । मुलुकमा विकास नै नभएको भने होइन । उदाहरणका लागि अर्थतन्त्र विस्तारका परिसूचकहरू हेरौं । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आकार १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमात्र थियो, यसका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय पनि वार्षिक १३ हजारमात्रै रहेको देखिन्छ । आव २०४६/४७ सालमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रको आकार बल्ल १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आयमा झिनो वृद्धि भइ १६ हजार रुपैयाँमात्र पुग्यो । अहिले अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि औसत १ लाख रुपैयाँ (१ हजार अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यसरी हेर्दा तीस गुणाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको र प्रतिव्यक्ति आय भने करिब ६ हजार गुणाले बढेको देखिन्छ । यद्यपि यो पनि औसतमात्र हो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको औसत प्रतिव्यक्ति आय २७०० अमेरिकी डलर अर्थात् वार्षिक औसत ३ लाख रुपैयाँबराबर छ भने अन्य सहरी क्षेत्रको पनि वार्षिक १५०० देखि १७०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी नै छ । (स्रोतः नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४) । तर, जुन ढंगले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विस्तार हुनुपर्ने थियो, त्यो भने हुन नसकेकै हो ।
विगत २० वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशतमात्र रहन पुग्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको पूरै दुई दशकलाई आर्थिक अवरुद्धताकै अवस्थामा ल्याइ पु¥यायो । ‘श्रीइन्द्रदेवका कृपाले’ बीच–बीचका केही वर्षहरूमा हासिल भएका ५ प्रतिशतभन्दा माथिका आर्थिक वृद्धिदरलाई अलग राख्दा आव ०५२/५३ देखि ०७२/७३ सम्मै औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशतमात्रको वृद्धिदर हासिल हुन पुग्यो । यसलाई पनि धन्य नै मान्नुपर्छ, किनकी उक्त दुई दशकको अवधिमा सरकारको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १९ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको थियो । अझ विकासतर्फ गरिएको खर्चमात्रै अलग्याएर हेर्ने हो भने यो औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन आउँछ । बुझ्नु पर्ने कुराचाहिँ पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै रकम विकास कार्यकै लागि भनेर खर्च गरिँदैन, त्यसको ४० देखि ४५ प्रतिशतमात्रै हो सार्वजनिक निर्माणमा जाने । बाँकी त गाडी, फर्निचरजस्ता अनुत्पादक सरकारी सम्पत्ति जोड्नैमा खर्च हुन्छ ।
यस्तो न्यून सरकारी खर्च स्थितिका बाबजुद हाम्रो अर्थतन्त्रले थोरै भए पनि गति लिइरहेकै छ, जुन हाम्रा नेताहरूका गर्व गर्ने÷पगरी गुथ्ने मेलो भइदिएको छ । विगत २३ वर्षमा घुमिफिरि सत्ताको मियो वरपर रहेका कुनै पनि दलका नेताले कुनै यस्तो क्षेत्र देखाइदिउन्, जसको टेकोमा हाम्रो अर्थतन्त्र उभिएको होस् ।
भन्नका लागि सेवा क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनिन्छ, तर सेवा क्षेत्रले गर्ने कुल मूल्य अभिवृद्धिले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई तलमाथि गर्न अझै भूमिका खेल्नै सकेको छैन । फेरि, अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाने क्रम नेपालमा मात्र देखापरेको होइन, यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो, तर चर्चित अर्थशास्त्री डोनी रोड्रिकले औद्योगीकरणबिनाको वृद्धि दिगो नहुने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । रोड्रिकका शब्दमा– जतिसुकै प्रयास गरे पनि औद्योगीकरणबाट विमुख बन्दै गएका विकासशील देशहरू यसअघि नै औद्योगीकरण भइसकेका देशहरूका तुलनामा निकै तल छन्, त्यो गति समाउन यिनलाई निकै समय लाग्नेछ ( रोड्रिक, प्रिम्याचुअर डिइन्ड्रस्ट्रिलाइजेसन– हार्भर्ड युनिभर्सिटी) ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व नबढिकन कृत्रिम रूपमा भएको वा देखाइएको आर्थिक वृद्धिको तात्विक अर्थ राख्दैन । हाम्रो हकमा भएको त्यही हो । २०४७ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रको ३० गुणाले वृद्धि भएको त भन्यौं, तर अर्थतन्त्रमा भएका विस्तारका क्षेत्रहरू एक–एकगरि देखाउन सक्ने अवस्था छैन । मुश्किलले विस्तार भएको १७–१८ हजार किलोमिटर पक्की सडक, बल्लतल्ल पुगेको ९ सय मेगावाट बिजुली हाम्रो गर्वको विषय हुँदै होइन । न त, राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हासिल भएका करिब ९ सय सांसद नै हाम्रा लागि गर्वका विषय हुन् । साँच्चै भन्ने हो भने जबसम्म जनताले देखिने गरि परिवर्तन अनुभूत गर्दैनन्, तबसम्म देखाइने विकासका कागजी प्रगतिका सूचकहरू तीनकुनेमा विदेशीलाई झुक्याउन टाँसिएको फ्लेक्सको रंगिन चित्रजस्तो मात्रै हो ।
प्रगति हुँदै नभएको भने होइन, विगत २ दशकमा देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधाले कम भयो, तर यो के सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको प्रतिफलस्वरुप हासिल भएको उपलब्धी हो त? एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु, खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । माथि चर्चा गरिएकै सरकारी खर्चका अनुपातलाई एक पटक आँकडामै हेरौं । आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा जम्मा पुँजीगत खच (जुन ०६१ साल अघि विकास खर्च भनिन्थ्यो) करिब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यो ०५२/५३ मा करिब २५ अर्ब रह्यो । ०६४/६५ मा बल्ल ५३ अर्ब पुगेको पुँजीगत खर्चले १ खर्बको आँकडा टेकेको छ, ०७२/७२ पछि मात्रै हो । त्यसपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बजेटसमेत जोडजाड पारेर २ खर्बभन्दा माथिको पुँजीगत बजेट देखाइ पनि वास्तविक खर्च डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघेन । अहिले विकासे आयोजनाहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरा स्वयं सरकारलाई नै थाह छैन, तिनका लागि लाख, करोडका हिसाबले हरेक वर्ष ठूलो बजेट छर्ने काम भइरहेको छ, जसबाट ठोस प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन । यो अवस्थामा अब हामी आफै विचार गरौैं– वार्षिक औसत २५ देखि ५० अर्बको औसत विकास खर्चका भरमा कसरी आमनागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्न सकिएला, कसरी आर्थिक समृद्धि नै हासिल हुनसक्ला?
आप्रवासनका साथै आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक चलायमानताको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेका कारणले अहिले हामी गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या २१ प्रतिशत, ४० प्रतिशत सहरी जनसंख्या, २२ प्रतिशत खर्चालु मध्यम वर्ग, औसत आयु ७१ वर्ष, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर भनेर विदेशीहरूसामु प्रगतिका सूचक देखाउन सफल भएका छौं । तर, यो हाम्रो दिगो विकासको बाटो पनि होइन, हामीलाई २०३६ सालदेखि नै देखाउँदै आएको ‘एसियाली मापदण्ड’, उच्च आर्थिक वृद्धि, सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड बनाइदिने सपनाा र समृद्धिका झलक पनि होइन ।
नेतृत्वले सँधैभरि लिने कामचलाऊको निर्णयले हामी आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्दैनौं । पुस्तान्तरणसँगै जसरी नयाँ नयाँ विकासक्रम देखिँदै आएको छ, त्यसलाई हामीले व्यक्तिगतदेखि राष्ट्रिय समृद्धिसँग आवद्ध गर्नका लागि नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिने बेला भएको छ । आर्थिक सुधारको प्रक्रिया झिनामसिना निर्णयहरूबाट सम्भव हुँदैन । विपक्षी दलले के पो भन्ला कि भनेर आलोचनाबाट डराउने नेतृत्वले कहिल्यै साहसिक निर्णय लिन पनि सक्दैन ।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक–वैचारिक निकाय (थिंक ट्यांक) गठन गर्ने कुरा भएको थियो, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पनि त्यसै थन्केर बसेको अवस्था छ । बजेटमा घोषणा गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग अझै गठन भएको छैन । दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले ठोस र साहसिक निर्णयहरू लिन त परै जाओस्, सामान्य नीतिगत सुधारसमेत गर्न सकेको छैन । माथिदेखि तलैसम्म तीनै तहका सरकारहरू अहिले पैसा जम्मा गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्, जसका लागि नयाँ–नयाँ तरिकाका कर, महसुल र दस्तुरहरू उठाइँदैछ । पञ्चायतकालमा रेडियो सुन्नका लागि लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो, राणाकालमा साइकल चढ्न विशेष अनुमतिपत्र लिनुपथ्र्यो, त्यसमा कर तिर्नुपथ्र्यो; त्यसैले अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता दिइएको हो भन्ने हलुका अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखबाट दोहो¥याइ नै रहिएको छ ।
आमनागरिकबाट उठाइएको करको सदुपयोग कहाँ कसरी भइरहेको भन्ने सुनिश्चित तुल्याउनु तीनै तहका सरकारहरूको दायित्व हो । नागरिकले तिर्ने महँगो कर जनप्रतिनिधिको विलासिता र प्रशासनिक खर्चका लागि होइन, त्यो पैसा कसरी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि परिचालित भइरहेको भन्ने जानकारी हरेक त्रैमासिक÷चौमासिकमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । तल्लो तहका भुँइमान्छेसम्म राज्यका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू समन्यायिक ढंगले पुग्नुपर्छ, अनिमात्र सरकारप्रतिको विश्वास नागरिकहरूमा बढ्छ ।
बेरोजगारी भत्ता बाँडेर समृद्धि आउँदैन, आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने दिशामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । अहिले सरकारका २० भन्दा बढी कोषहरूमा अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय भएर बसेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा नागरिकबाटै विभिन्न नामका कर र महसुलहरूबाट जम्मा गरिएको हो । तिनको सदुपयोग गर्न सकिएमा आमनागरिकबाट थप करको बोझ नै नथपी विकासका लागि थप अर्बौं रकम परिचालन गर्नसकिन्छ । यस बाहेक पञ्चायतकालदेखि हालसम्म विभिन्न नाममा स्थापना गरिएका संस्थान, बोर्ड र समितिहरूका नाममा देशभरि नै हजारौं बिगाह÷रोपनी जग्गाहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन् । हालसम्म खारेज भएका/निजीकरण गरिएका ३० सार्वजनिक संस्थानको मात्र होइन, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीजस्ता संस्थानले विभिन्न प्रयोजनका लागि र सरकार आफैले बाटो, पुल आदिका लागि अधिग्रहण गरेका जग्गा पनि छन् । तिनलाई करारमा दिएर सरकारले थप आयआर्जन गर्नसक्छ । यस्तो निष्क्रिय सम्पत्तिको खोजी गरेर जलविद्युत्, दोस्रो विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, द्रूतमार्गजस्ता लक्षित क्षेत्रहरूमा राज्यले खर्च गरेमा त्यसबाट छोटो अवधिमा नै देखिने गरि प्रतिफल हासिल हुनेछ ।
कारोबार दैनिक, १९ भदाै २०७५